Shiinaha si aad ah ayey ugu faraxsan yihiin Warshadda Photoluminescent Pigment iyo soo-saareyaasha | Grand Luminous
Degdeg Deg deg ah Photoluminescent Pigment Noocyada fosfooska noocan ah way fududahay in si dhakhso leh loogu farxo, waxaa lagu farxi karaa iftiinka daciifka ah, waxqabadka luminescence-ka ayaa si muuqata u muuqda 30 ~ 60 daqiiqadood, midabka budada ah waa midab hurdi ah, waana mid aad ula jaan qaada kuwa kale warbaahinta. Nagala soo xiriir faahfaahin dheeraad ah. Tixraac ahaan, faahfaahinta soo socota ee midabkan xiisaha badan: Midabka dhalaalaya: taxanaha huruudda-cagaarka Waxyaalaha / Koodhka Iftiinka （mcd / m2） Waqtiga dambe kadib Min Par ...
Nooca foshorka noocan ah wuu sahlan yahay in si dhakhso leh loogu farxo, wuxuu ku farxi karaa iftiinka daciifka ah, waxqabadka luminescence-ka ayaa si muuqata u muuqda 30 ~ 60 daqiiqo, midabka budada ah waa midab hurdi khafiif ah, waana mid si aad ah ula jaan qaada warbaahinta kale. Nagala soo xiriir faahfaahin dheeraad ah.
Tixraac ahaan, waxyaabaha soosocda ee soo socda ee midabbadan xiisaha leh:
Xawaaraha / lambarka
Hore: Daabacaadda Iftiinka Luminous
Xiga: Mosaics galaas oo iftiin leh